Owesilisa uxosha izingane zakhe ngoba ethi zine-HIV | News24
Owesilisa uxosha izingane zakhe ngoba ethi zine-HIV
Bulawayo - Owesifazane ubabele enkantolo yaseHarare ecela incwadi yesivimbezelo kumyeni wakhe amsola ngokuxosha izingane zabo ezimbili emzini wabo ngoba ethi zine-HIV.
Leli cala bekumele lilalelwe ngaphambi kweMantshi u-Audrey Tarugarira kepha lacishwa emabhukwini enkantolo ngoba zombili izinhlangothi azifikanga enkantolo, kubika iBulawayo24.
Esicelweni sakhe, owesifazane eligodliwe igama lakhe, uthi umyeni wakhe uyamhlukumeza nezingane zabo.
OLUNYE UDABA: Abane-HIV bavalwa inzalo ngenkani - Umbiko
"Waxosha izingane zethu ezimbili wathi azihambe ngoba vele sezizoshona ngoba zinesandulela ngculazi," kusho isicelo.
Lo wesifazane uthi umyeni wakhe uhlezi njalo efika nezintombi emzini wabo alale nazo embhedeni wabo.
"Uyindoda engenamahloni. Ngelinye ilanga waze wacishe walala nentombi yakhe phambi kwezingane zethu," esho.